विनाको बारेमा के खबर आयो ? फेसवुकमा पनि यस्तो लेखेकी रहिछन् (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Press
विनाको बारेमा के खबर आयो ? फेसवुकमा पनि यस्तो लेखेकी रहिछन् (भिडियो हेर्नुस्)
July 9, 2021 227
वैज्ञानिक महावीर पुन अमेरिकामा सम्मानित भएका छन । नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न अनुसन्धानमूलक काम गरेको भन्दै उनलाई ओहियो शहरका दुई मेयरले सम्मान गरेका हुन् ।
आफैँ पढेको नेब्रास्का विश्वविद्यालयमा काम परेर उनी करिब दुई महिनाअघि अमेरिका गएका थिए । त्यहाँको बसाइँमा नेपाल आविष्कार केन्द्रले गरिरहेकाे कामबारे जानकारी दिन उनी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागीसमेत भए । उनी आविष्कार केन्द्रका संस्थापक हुन् ।
अमेरिका बसाइँमा आफू २८ वटा राज्यको ५२ शहरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएकाे उनले बताए । महावीर पुन लामो समययता सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय छन् । गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याएका उनले सन् २०१२
मा सूचना तथा प्रविधिमार्फत देश विकासमा सम्भावनाहरूको खोज र आविष्कार गर्ने उद्देश्यले नाफारहित संस्था राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रकाे स्थापना गरेका थिए ।थप समाचार – अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गुगल, ट्विटर र फेसबुकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। आफू सेन्सरशीपबाट पीडित भएको दाबी गर्दै उनले ती कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गरेका छन् ।
उनका समर्थकहरूको नेतृत्वमा अमेरिकी संसद्‌ द क्यापिटलमा दङ्गा भएपछि सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राख्दै उनका सामाजिक सञ्जाल खाताहरू निलम्बित गरिएको थियो। बेडमिन्स्टरस्थित गल्फ रिसोर्टबाट प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू र डेमोक्र्याटहरूको आलोचना गरेका छन् ।
उनले भने, हामीहरू नक्कली प्रतिबन्ध, चुप लगाउनेहरूलाई रोक्ने र कालो सूचीमा राख्ने र गालीगलौज गर्ने कामको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ, तपाईँहरूलाई त्यो सबै राम्ररी थाहा छ। मुद्दामा आरोपित सेन्सरशीप रोक्न अदालतको आदेश माग गरिएको छ ट्रम्पले यदि उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् भने जोसुकैलाई त्यसो गर्न सक्छन भनेका छन्।
फ्लोरिडास्थित सङ्घीय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाप्रति लक्षित कुनै पनि प्रविधि कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया नदिएको बीबीसीले लेखेको छ ।सामाजिक सञ्जालबाट निलम्बनमा परेपछि ट्रम्पले आफ्ना कुरा शेयर गर्न पाएका छैनन् । आफ्ना कुराहरु जनतामाझ पुर्याउनको निम्ती उनले आफ्नो वेभसाइट पनि बनाएका थिए । तर पछि त्यो पनि बन्द गरेका थिए ।
Prevअमेरिकाका दुई मेयरले महावीर पुनलाई सम्मान गरे
Next‘पुलिस दाजु ! त्यस्तो केही पनि छैन् म आफैंले गरेको हो’ जेनी कुँवरको नोट…?